Pang Adventures pakupedzisira anorova iyo App Store | IPhone nhau
Ivo vanonyanya kutamba vatambi vanowanzo tarisa kumashure vofunga nezvekuti zvinganakidze sei kugona kutamba Super Mario Bros, kana iyo chaiyo Pang pane smartphone. Izvo zvavaizopa kuti vakwanise kutamba mitambo yavo yavanofarira vasina kusiya imbwa dzakakora munhandare dzepedyo. Dzimwe nguva, sezvazviri ne Simbi Slug, ivo vanogadzira vanonzwisisa izvi zvikumbiro uye vovhura mutambo mune nharembozha, panguva ino yaive nguva yaPang. Kunyangwe isina kufanana neiyo vhezheni vhezheni, ivo vaenda kure kure kupa chimiro chitsva Pang Adventures.
Kubva paruoko rweDotEmu, nyanzvi mune izvi zvekuburitsa mitambo yekare pazvinhu zvitsva, zvinouya kwatiri Pang Adventures, basa rinoramba rakangofanana, pfuti yedu yekuda kuziva ichafanirwa kuputika zvakare uye zvakare mabhuru ane ruvengo anomuka nekudonha opedzisira atiuraya, nguva yega yega patinopfura papombi inozokamurwa nepakati, seizvi kakawanda. Chinangwa chedu chakareruka, putika mabhuru ese kakawanda sezvazvinodiwa pasina kunetesa hupenyu.
Nematanho anodarika zana anodarika neAntarctica, Scocia, Death Valley neBora Bora Pakati pedzimwe nzvimbo, isu tinofanirwa kufambira mberi zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo. Isuwo tinowana matatu emamodhi modhi, iyo yakasarudzika Tour mode, iyo Score Attack umo isu isu chete tine matatu hupenyu kuti tishandise mutambo wese uye iyo Panic Mode iyo inowedzera kuoma kwematanho makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kusvika pakakwirira.
Ehezve, iwe haugone kupotsa bhosi kurwa, saka kana iwe uri mudiwa wemhando yepamusoro mitambo kana Pang Zvese mune zvese, ino inguva yakanaka yekuisa maoko ako pamutambo. Iyo zvakare inogadziridzwa nenzira yekare, hapana mubhadharo wakasanganiswa, Zvinodhura € 2,99 asi zvakanyatso kukosha. Uye zvirokwazvo iwo mutambo wepasirese, kune ese maIOS madhizaini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pang Adventures pakupedzisira anosvika paApp Store
Best Buy yatotinyevera nezvekuvandudzwa kweMacBook 12 "